THE LIZZIE MCGUIRE MOVIE သည်အမြုပ်ဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးဒီ ၂၉ ချိန်ကသက်သေပြသည် - သတင်း
The Lizzie McGuire Movie သည်အမြုပ်ဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးဒီ ၂၉ ချိန်ကသက်သေပြသည်
လွန်ခဲ့သော ၁၆ နှစ်အတွင်းရုပ်ရှင်ကားများစွာထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်းမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှ The Lizzie McGuire Movie ဖြစ်သည့် Disney ၏လက်ရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိပါ။ ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိမိန်းကလေးငယ်များသည်ဘယ်တော့မျှမေ့နိုင်လိမ့်မည်မထင်ပါ။ 'Dreams Made Of' ဘာလဲ '၏ Duets များကိုနေရာတိုင်းရှိအိပ်ခန်းများတွင်သီဆိုခဲ့ကြသည်။ Lizzie ၏ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဖက်ရှင်ရွေးချယ်မှုများကို Mizz နှင့် Girl Talk တို့တွင်ချီးမွမ်းခဲ့သည်။ လူတိုင်းက PGL ကျောင်းမှ Cornwall သို့သွားသောခရီးတွင်အမှန်တကယ်ပေါ့ပ်ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်သည့်၎င်းတို့၏ရှည်လျားသောပျောက်ဆုံးနေသည့်အီတလီdoppelgängerကိုရှာဖွေရန်စိတ်ကူးခဲ့ကြသည်။
အခုဖြစ်မယ့်အကြောင်း အဆိုပါ Lizzie McGuire ပြပွဲတစ် reboot ငါသမိုင်း၏ဤစင်ကြယ်သောယခုအချိန်တွင်ပြန်လည်လည်ပတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ Lizzy McGuire Movie ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ လိုက်၍ မည်မျှရယ်စရာကောင်းသည်ကိုသတိရပါ။
၁။ ပထမ ဦး စွာ LIzzie ၏အစ်ကိုဖြစ်သူ Matt သည်အဘယ်ကြောင့်အလွန်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်သနည်း။ သူသည်သူမဝတ်စုံများကိုပြောင်းလဲနေသောကြောင့်အဘယ်ကြောင့်သူမရိုက်ကူးနေသနည်း။
စိတ်မကောင်းပေမယ့်သူကတွားသွား ဘာတကယ့်ငရဲလဲ။ အဘယ်သူသည်ဤမျှလောက်များစွာသောသူတို့နှမအပေါ် tab ကိုစောင့်ရှောက်?
(၂) Hillary Duff ကိုမည်သို့ကပြရမလဲဆိုတာသင်ကြားပေးခဲ့သည်။
ငါဒီရှုပ်ထွေးမှုကိုကြိုးကိုင်ခဲ့တဲ့ choreographer နဲ့စကားပြောချင်တယ်။
3. Urm, အလှမယ် Undermeyer တစ်ဒစ်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အလုပ်တစ်ခုလုံးကကလေးတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့ဖြစ်ပြီး Gordo ကို 'spineless little jellyfish' နဲ့ 'brownnose' လို့ခေါ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုခေါ် !!!
၄။ Lizzie ကဘာကြောင့်တစ်နာရီလောက်ကြာအောင်သူမမိခင်ကိုလေယာဉ်ကွင်းမှာပွေ့ချီပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်သွားပြီးနောက်ဖက်ကိုပြန်ဖက်လိုက်တာလဲ။
ချစ်သူတို့၊ ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ကြာအောင်နေ နက်ရှိုင်းတယ်။
ပြီးတော့သူမဆက်ပြီးဒီ 'စော်ကားမှု' တွေနဲ့ဘယ်သူတွေထွက်ပေါ်လာတာလဲ။ သူတို့ကစိတ်မကောင်းပါဘူး!
သူတို့သညျငါ့ကို meme ငှါပြု
ဟုတ်ပါတယ် Paolo ။ သူများသည်အပြာရောင်စုံမျက်မှန်တရားမဝင်ဖြစ်သင့်သည်။
၇။ Paolo က Isabella အကြောင်းဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနေတာလဲ။ သူမသေပြီလား
လမ်းပေါ်မှာလူစိမ်းတစ်ယောက်ကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်စွဲလမ်းနေတာလဲမသိဘူး။ ဒါတွေအားလုံးကအရမ်းထူးဆန်းတယ် ဒီရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူး။
၈။ လူတချို့က 'လူတွေကစွန့်စားမှုရှာဖို့ရောမကိုလာကြတယ်' လို့ဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲ
ဒါကအရာမဟုတ်ပါ ??? အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတာကိုရပ်လိုက်ပါ။
၉။ ဒီ Paolo ကောင်လေးဘာကြောင့်အဖြေမပေးနိုင်တာလဲ။
အလေးအနက်ထားသူ Lizzie pestering စောင့်ရှောက်။ Dude ကသူမနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးလို့ပြောတယ် သူမကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပါ
10. Lizzie ကစီဒီဖွင့်စက်ကိုနားထောင်နေတယ်။
၁၁။ Lizzie ဘွဲ့လွန်ဘေးအန္တရာယ်သည်ကမ္ဘာ့သတင်းအတွက်မည်မျှဆိုးဝါးသနည်း။
သူမကျဆုံးသွားတဲ့ဗီဒီယိုက CNN မှာလား။ လာစမ်းပါ။
၁၂။ ဒီဟာကိုရှင်းလိုက်မယ်။ Lizzie ကဒီကျပန်းလူကိုလမ်းပေါ်မှာမနေ့ကတွေ့တယ်။ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိဘူး။ သူမရောမမြို့ကတဆင့်သူမနဲ့အတူစီးနင်းလိုက်ပါလာသလား။ လုံးဝအေးမြ။
၁၄။ Paolo က Lizzie ရဲ့အမြွှာ / ပုံပန်းသဏ္datedာန်တူတဲ့ကောင်လေး။ ဒီဟာအနီရောင်အလံမဟုတ်ဘူးလား ???
သူကသူမကိုအစားထိုးဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ သူဟာကွက်လပ်ကိုဖြည့်နေပါတယ် သူ့ကိုယ်သူ Lizzie မလုပ်ပါနဲ့ အစား Self- အကူအညီနဲ့စာအုပ်ဖတ်ပါ။
Paolo ဟာ softboy မှာအကြီးဆုံးပါ
urgh ။ လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီကသင်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သူနှင့်သင်မည်သို့စိုစွတ်မည်နည်း။
Lizzie၊ သူပြောတာအားလုံးကြားဖူးလား။ သူသည်သင်၏စင်ပေါ်မှာဖြစ်ရန်သင့်အားဆန္ဒရှိသည်။
၁၇။ Gordo ကိုမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းကစောင့်ကြည့်ဖို့အလွန်နာကျင်သည်
သူဘာကြောင့်ဒီလောက်အဆင်မပြေတာလဲ အဘယ်ကြောင့်သူကပဲတစ်ခုခုမပြောသနည်း သူအရမ်းစိတ်ပျက်တယ်။
၁၈။ အခု Melina ကဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာအားလုံးကိုအီတလီ tabloids တွေဆီရောင်းချင်တယ်။ ???
သူဘယ်သူလဲတောင်ဘယ်သူလဲ သူသည်အဘယ်မှလာသနည်း ??
၂၀၀၃ ခုနှစ်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းသည်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Lizzy သည်သူမခေါင်းပေါ်တွင်သတင်းစာပါသည့်လမ်းဘေးစင်္ကြံလမ်းပေါ်တွင်လျှောက်နေသည်။ ယခုမှာသူသည်မီးရထားမီးထွန်းလျက်နေသည်။ ယခုသူသည်ဤထူးဆန်းသောအစ်စကင်မ်စားဆင်ယင်ပစ္စည်းကိုဝတ်ဆင်ထားသည်။ ဟုတ်တယ်၊ လုံးဝပုံမှန်။
20. Matt သည်ဤမျှလောက်ဆံပင်ဂျယ်လ်ကိုဘာကြောင့် ၀ တ်ဆင်ခဲ့တာလဲ။
၂၁။ Lizzie ကသူမနှုတ်ခမ်းကိုကိုက်လိုက်တာကိုရပ်တန့်သွားမှာလား။
သူမ၏မျက်နှာပေါ်တွင်နာကျင်သောစကားရပ်ရှိခြင်းအပြင် ၂၄/၇ ဖြစ်သည်။
၂၃။ Isabella သည်မည်သည့်နေရာမှလာသနည်း။ Gordo သည်ဤအသစ်သောအချက်အလက်များအားလုံးကိုမည်သို့လေ့လာခဲ့သနည်း။
လေဆိပ်တွင်သူမ၏မိသားစုအား Lizzie အားငါးမိနစ်ခန့်ရိုက်ချက်မပေးနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤနေရာတွင်ကြံစည်မှုပုံစံတစ်မျိုးမျိုးရှိလိမ့်မည်။
၂၄။ Sidenote: Hilary Duff ၏အီတလီစကားလုံးသည် SHOCKING ဖြစ်သည်
2003 ခုနှစ် sexism! မင်းတည်ရှိနေတာကိုငါဘယ်လိုမေ့သွားမှာလဲ။
carbs ကမင်းကိုစွမ်းအင်ပေးတယ်၊ မင်းမျိုးချစ်စိတ်ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့စွမ်းအင်လိုတယ်ထင်တယ်။
၂၈။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းငါ့ဘ ၀ မှာငါတွေ့ခဲ့သမျှသေနိုင်သမျှအနမ်းပါ
သူကသူ့ကိုနမ်းတာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီငါလုံလောက်တယ် အဲဒါကိုပိတ်လိုက်။
• ငါဒီကိုပြောရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Angus, Thongs နဲ့ Perfect Snogging တွေကလုံးဝရှုပ်ထွေးသွားတယ်